Tababare Ole Gunnar Solskjaer Oo Ka Hadlay Haddii Ay Dalabyo U Heleen Pual Pogba & Romelu Lukaku. - Gool24.Net
Tababare Ole Gunnar Solskjaer Oo Ka Hadlay Haddii Ay Dalabyo U Heleen Pual Pogba & Romelu Lukaku.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa saxaafada ku eedeeyay in ay buun buuniyeen arinta mustaqbalka Pual Pogba wuxuuna sidoo kale ka hadlay xaalada Romelu Lukaku.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa cadeeyay in ayna jirin wax dalabyo ah oo laga soo gudbiyay Pual Pogba iyo Romelu Lukaku wuxuuna sheegay in ayna kooxdiisu doonayn in ay xidigahan iibiso.
Hadalka Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku soo beegmaya waqti uu wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola laba jeer cadeeyay in Pogba uu maamulka kooxdiisa waqti hore ku war galiyay rabitaanka bixitaankiisa isla markaana aanu xidigani wax qalad ah samayn.
Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlaya Pogba iyo Lukaku in ayna dalabyo u helin ayaa yidhi: “Waxaan la xidhiidhayay Pual iyo Romelu. Inta aan anigu ogahay, anagu maanu helin wax dalabyo ah oo ciyaartoydayada ah. Anagu waxanau nahay Man United, waajib naguma aha in aanu ciyaartoyda iibino”.
“Pual iyo inta ugu badan ciyaartoydayadu waxay heleen heshiisyo waqti dheer ah, waxaanu nahay Man United, qasabna naguma aha in aanu ciyaartoyda iibino” ayuu Solskjaer hadalkiisa sii raaciyay.
Hadalka Solskjaer waxa uu cadayn u yahay wararkii sheegayay in Man United ayna doonayn in ay Pual Pogba iibiso iyada oo sidoo kale uu soo baxay warka sheegayay in Lukaku uu ka baryay in aanu kooxda sanadkan ka bixin.
Manchester United ayaa Real Madrid xaalada ugu adkaynaysa heshiiska Pual Pogba ay ku doonayaan waxayna ku adkaysanayaan in aanu iib ahayn taas oo Madrid ku qasbaysa in ay dalabkeeda si wayn sare ugu qaado.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa saxaafada ku eedeeyay in ay buun buuniyaan xaalada Pual Pogba isaga oo biyo qabow ku shubay hadaladii uu Mino Raiola ku doonayay in uu cadaadis ku saaro maamulka Old Trafford.